रोनाल्डो र मेस्सीको युग तोडियो, लुका मोड्रिक बने फिफा वर्ष खेलाडी ! - Everest Dainik - News from Nepal
रोनाल्डो र मेस्सीको युग तोडियो, लुका मोड्रिक बने फिफा वर्ष खेलाडी !
एजेन्सी, असोज ९ । क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सीको एक दशक देखिको दबदबा तोडिएको छ । दबदबा तोडिएको वर्षको उत्कृष्ट फुटबलर अवार्डमा हो। गएको एक दशकदेखि रोनाल्डो वा मेस्सीले वर्षको उत्कृष्ट फुटबलरले पाउने बालोन डी’ ओर वा फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड पाउँदै आएका थिए । तर, यो पटक भने फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड लुका मोड्रिकले जितेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस रोनाल्डोले छोडेपछि मड्रिडमा जर्सीको चर्चा, ७ नम्बर जर्सीका लागि को-को इच्छुक ?
यो पटक मेस्सी अन्तिम तीनको मनोनयनमै परेनन् भने मोड्रिकले रोनाल्डो र मोहम्मद सलाहलाई पछि परे । उनले २९.०५ प्रतिशत मत पाए भने रोनाल्डोले १९.०८ र सलाहले ११.२३ प्रतिशत मत पाएका थिए ।
मड्रिडले लगातार तीन पटक च्याम्पियन्स लिग जित्दा टिमका महत्वपूर्ण सदस्य रहेका उनले क्रोएसियालाई विश्वकपको फाइनलसम्म पुर्याएका थिए । उनले रोनाल्डोलाई पछि पार्दै यूईएफए प्लेयर अवार्ड पनि जितेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस लुका मोड्रिच मेसी र रोनाल्डोभन्दा लोकप्रिय !
ट्याग्स: Luka madrij